Genesis 43 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yosef nuanom san kɔɔ Egypt bio; wɔne Benyamin (1-14)
Yosef ne ne nuanom san hyiae (15-23)
Yosef ne ne nuanom too nsa didii (24-34)
43 Afei ɔkɔm no mu yɛɛ den wɔ asaase no so.+ 2 Enti bere a aduan a wɔde fi Egypt bae no sae no,+ wɔn papa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsan nkɔtɔ aduan kakra mmra.” 3 Ɛnna Yuda ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔbarima no kaa no anibere so kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Sɛ moamfa mo nua no amma a, monhwɛ na moansi m’anim bio.’+ 4 Enti sɛ wobɛma yɛne yɛn nua no akɔ a, ɛnde yɛbɛkɔ akɔtɔ aduan no abrɛ wo. 5 Na sɛ woamma yɛamfa no ankɔ a, ɛnde yɛrensan nkɔ, efisɛ ɔbarima no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Mo nua no nka mo ho a, monhwɛ na moansi m’anim bio.’”+ 6 Na Israel+ bisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na moakɔfa ɔhaw aba me so saa? Ɛyɛɛ dɛn na moka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ mowɔ nua bi wɔ hɔ?” 7 Wobuae sɛ: “Ɔbarima no ara na obisaa yɛn abusua ho asɛm sɛ, ‘Mo papa da so te ase? Mowɔ nua foforo bi?’ Ɛnna yɛn nso yɛmaa no ɛho mmuae.+ Anka yɛbɛyɛ dɛn ahu sɛ ɔbɛka sɛ, ‘Monkɔfa mo nua no mmra’?”+ 8 Ɛnna Yuda ka kyerɛɛ ne papa Israel sɛ: “Ma memfa abofra no nkɔ,+ na yɛne wo ne yɛn mma+ atena ase, anyɛ saa a yebewuwu.+ 9 Medi no agyinam.+ Sɛ biribi to no a, bisa no me nsam. Sɛ mamfa no ammrɛ wo a, medi fɔ wɔ w’anim afebɔɔ. 10 Sɛ yɛkɔe a, anka saa bere yi yɛakɔ aba mprenu.” 11 Ɛnna wɔn papa Israel ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ saa na ɛte a, ɛnde nea monyɛ ni: Momfa asaase yi so nneɛma pa no bi ngu mo nkotoku mu mfa nkɔma ɔbarima no:+ balsam+ aduhuam kakra, ɛwo kakra, labdanum aduhuam, dua abona,*+ nkate, ne aborɔfo nkate. 12 Sika a mode rekɔ no, monyɛ no mmɔho, na momfa sika a wɔde hyehyɛɛ mo nkotoku mu no nsan nka ho nkɔ;+ ebia ɛfaa wɔn ani so. 13 Momfa mo nua no na monsan nkohu ɔbarima no. 14 Ade nyinaa so Tumfo Nyankopɔn mma ɔbarima no nhu mo mmɔbɔ na onnyaa mo nua no nka Benyamin ho mma mo. Nanso ɛba sɛ hwere ara na mɛhwere me mma no nso a, ɛnde hwee nni hɔ a metumi ayɛ!”+ 15 Enti mmarima no faa akyɛde no ne sika no mmɔho, na wɔde Benyamin kaa wɔn ho siim kɔɔ Egypt, na wɔsan kogyinaa Yosef anim.+ 16 Bere a Yosef hui sɛ Benyamin ka wɔn ho ara pɛ na ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhwɛ ne fi so no sɛ: “Fa mmarima yi kɔ fie na kum mmoa no bi yɛ aduan, na me ne wɔn bedidi awia yi.” 17 Ntɛm ara na ɔbarima no de wɔn kɔɔ Yosef fi sɛnea Yosef kae no.+ 18 Bere a wɔde mmarima no kɔɔ Yosef fi no, wɔbɔɔ hu na wɔkae sɛ: “Sika a wɔde hyehyɛɛ yɛn nkotoku mu no nti na wɔde yɛn aba ha yi. Wɔrebɛkyere yɛn de yɛn ayɛ nkoa na wɔafa yɛn mfurum no!”+ 19 Enti bere a woduu ofi no kwan ano no, wotwiw bɛn ɔbarima a ɔhwɛ Yosef fi so no, na wɔne no kasae. 20 Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo, yɛn wura! Yɛbaa ha bɛtɔɔ aduan.+ 21 Nanso bere a yekoduu ahomegyebea a yɛsan yɛn nkotoku no, yehui sɛ obiara sika hyɛ ne kotoku mu sɛnea ne dodow te pɛpɛɛpɛ.+ Enti yɛasan de aba. 22 Yennim onii ko a ɔde sika no hyehyɛɛ yɛn nkotoku mu. Na yɛde sika foforo aba rebɛtɔ aduan.”+ 23 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛnyɛ hwee; munnsuro. Mo Nyankopɔn ne mo papa Nyankopɔn na wama mo ademude wɔ mo nkotoku mu. Me nsam na mo sika no dii kan bae.” Afei okoyii Simeon brɛɛ wɔn.+ 24 Ɛnna ɔbarima no de wɔn wuraa Yosef fi no mu, na ɔmaa wɔn nsu hohoroo wɔn nan ho. Afei ɔmaa wɔn mfurum no aduan. 25 Na woyiyii wɔn akyɛde no+ sɛ Yosef ba awia no a wɔde bɛma no, efisɛ na wɔate sɛ wobedidi wɔ hɔ.+ 26 Bere a Yosef baa ofie hɔ no, wɔde nneɛma a wɔde brɛɛ no no maa no, na wɔde wɔn anim butubutuw fam wɔ n’anim.+ 27 Afei obisaa sɛnea wɔn ho te, na ɔkae sɛ: “Mo papa akwakoraa a mokaa ne ho asɛm no ho te dɛn? Ɔda so te ase?”+ 28 Wobuae sɛ: “Yɛn papa, w’akoa da so te ase na ne ho ye.” Afei wɔbɔɔ wɔn mu ase de wɔn anim butubutuw fam.+ 29 Bere a ɔmaa n’ani so huu ne nua Benyamin, ne maame ba no,+ ɔkae sɛ: “Mo nua kumaa a mokaa ne ho asɛm kyerɛɛ me no ni anaa?”+ Na ɔtoaa so sɛ: “Me ba, Onyankopɔn nhyira wo.” 30 Afei, Yosef yɛɛ ntɛm puei, efisɛ ne nua no nti, na ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yiye, enti na ɔrepɛ baabi akosu, na ɔkɔhyɛɛ dan mu sui.+ 31 Owiei no, ɔhohoroo n’anim bae; afei de na watumi ahyɛ ne ho so. Ɔkae sɛ: “Momfa aduan no mmra.” 32 Wɔde ɔno nko ara de sii n’anim, na wɔde ne nuanom de sisii wɔn anim, ɛnna wɔde Egyptfo a wɔne no redidi no nso de sisii wɔn anim. Ná Egyptfo no rentumi ne Hebrifo no nto nsa nnidi, efisɛ na ɛyɛ Egyptfo akyiwade.+ 33 Ne nuanom tenatenaa* n’anim nnidiso nnidiso fi ɔpanyin so+ kosi akumaa so, na obiara hwɛɛ ne yɔnko anim a wonhu nea wɔnka. 34 Ɛwom ara a, na wama wɔayi ne pon so aduan no bi de akɔma wɔn, na ɔmaa Benyamin de no dɔɔso sen wɔn a wɔaka no de mmɔho anum.+ Na wɔne no didi nomee kosii sɛ wɔmee.
^ Ná wɔde nsu a efi dua abona yi mu yɛ aduhuam.
^ Anaa “Wɔtenatenaa.”